Taliyihii Booliska DF-ka oo Cudur aan la aqoon Ugu Dhintay Magaalada Muqdisho iyo R/Wasaaraha oo Shaki Muujiyay..
Thursday October 30, 2014 - 17:04:54 in Wararka by Super Admin
Mas'uul katirsanaa Maamulka Xasan Sheekh ee gumeystaha la shaqeeya ayaa maanta si lama filaan ah ugu geeriyooday magaalada Muqdisho.
Taliyihii guud ciidanka Booliska Max'med Xasan Ismaaciil ayaa dhintay kadib markii wadnuhu istaagay,ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in taliyaha uu xanuun aan la aqoon kusoo booday kadibna loola cararay isbitaal kuyaal degmada C/Caziiz halkaasi oo uu ku nafbaxay.
Booliska DF-ka ayaa wadashaqeyn dhanka ladagaalanka waxa loogu yeero Argagaxisada laleh wadamada Itoobiya iyo reer galeedka iyagoona xabsiyada ku gura dadka muslimiinta ee diintooda ku ad-adag.
R/wasaaraha DF-ka Cabdi Wali sheekh oo warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in shaki ay ka muujinayaan qaabka uu udhintay taliyaha booliska isagoona guddi wasiirro ah usaaray in ay soo baaraan qaabka uu u dhintay madaxii booliska.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidanka Nabad sugidda DF-ka ay xoog ku galeen isbitaalka al-ummah ee degmada C/caziiz halkaasi oo aheyd halka uu taliyaha booliska ku dhintay waxayna xireen dhaqaatiirta isbitaalka waxaana loola dhaqaaay dhanka sarta Habar Khadiijo.